ဖှုံဆိုဒ်ကျိုင်: လက်ဆောင်ပေးတိုင်း ယူသင့်သလား
zarny win iPhone လက်ဆောင်ပေးတာ မယူဘူး တဲ့။ Supinya Klangnarong ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးပါ။ သူက NBTC လို့ ခေါ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အသံလွှင့်လုပ်ငန်း နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသား ကော်မရှင် လူကြီးတယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတခုက သူ့ကို မှတ်ဥာဏ် 64GB ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ iPhone လက်ဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်း ကြာသပတေးနေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် မျက်နှာဖုံးမှာ ပါလာပါတယ်။
လက်ဆောင်ပစ္စည်း လက်ခံခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NBTC ကော်မရှင်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ တိတိကျကျ ရေးသားထုတ်ပြန်ဖို့ သူက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် တဲ့။
လက်ဆောင်ပေးလာတဲ့ ခြင်းထဲမှာ iPhone နဲ့အတူ ဗုဒ္ဓဆင်းတု၊ ကော်ဖီ နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေပါတယ်၊ ဈေးကြီးတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခကို ဖြစ်စေတယ် လို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။
အစိုးရ၀န်ထမ်းတဦးဟာ ဘတ် ၃,၀၀၀ (ဒေါ်လာ တရာ) ထက် ပိုတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းကို လက်မခံရဘူး ဆိုပြီး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စည်းကမ်းချက်ထုတ်ထားတာကိုလည်း သူက ထောက်ပြပါသေးတယ်။
ဒီလို တန်ဘိုးကြီးပစ္စည်းကို လက်ခံရင် ဌာနရဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်တယ် လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
iPhone လက်ဆောင်ကို ငြင်းလိုက်တဲ့ Supinya
ထိုင်းမှာ ၀န်ထမ်းတွေက ဒီလိုအနေအထား ရှိတယ် ဆိုရင် သတင်းသမားတွေကရော ဘယ်လိုလဲ?
ထိုင်းနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက် ၃၀ ထဲက အမှတ် ၂၂ မှာ အခုလို ဆိုထားပါတယ်။
"စာနယ်ဇင်းသမားများသည် သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ တန်စိုးလက်ဆောင် သို့မဟုတ် တန်ဘိုးကြီးလက်ဆောင် သို့မဟုတ် အခွင့်အရေး မယူရ။ သတင်းပို့ခြင်းအား တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက် လွှမ်းမိုးမှု ရှိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်"
တိုက်ဆိုင်လို့ ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင် ဧရာဝတီကရော ဘယ်လိုလဲ?
ဧရာဝတီသတင်းဌာန စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်လမ်းညွှန် http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/2011-06-21-05-45-10 မှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။